Top 10 Izindawo Eziyimfihlo Emhlabeni | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Top 10 Izindawo Eziyimfihlo Emhlabeni
Amachibi angaphansi komhlaba, izimpophoma ezifihliwe, indlela-eshayiwe amadolobha amahle, nemibono emihle, umhlaba ugcwele izindawo eziyimfihlo ezimangazayo. Lezi phezulu 10 izindawo eziyimfihlo eMhlabeni zonke ziyafinyeleleka kubahambi kepha zivame ukuphuthelwa. Ngakho, lungiselela uhambo oluthinta ingqondo oluya ezindaweni ezicashile nezimangalisa kakhulu emhlabeni.
1. Indawo Eyimfihlo Ephezulu EJalimane: Berchtesgaden
250 km yezindlela zokuhamba izintaba, amanzi acwebile acwebile acwebile, futhi iziqongo ezinhle, Berchtesgaden National Park ingenye yezindawo eziyimfihlo ephezulu eJalimane.
Le paki kazwelonke iseduze nomngcele waseJalimane ne-Austria futhi iyikhaya lamasimu amahle kakhulu eBavaria. Ngenkathi izivakashi eziningi ziya e Black Forest, Ngaya Okhahlamba LwaseSwitzerland, noma isikhungo seYurophu, le paki kazwelonke emangalisayo ayinakwa. Ngakho, ungaba omunye wabahambi abambalwa kakhulu, ukuba nepikiniki nge IChibi iKonigssee, try to summit to Watzmann – at 2,713 amamitha we- ukubukwa obumangalisayo wezigodi, nemvelo yasendle engathintwanga.
ISalzburg iya eBerchtesgaden Ngesitimela
EMunich iya eBerchtesgaden Ngesitimela
ILinz iya eBerchtesgaden Ngesitimela
Innsbruck eya eBerchtesgaden Ngesitimela
2. Indawo Eyimfihlo Kunazo Zonke E-Italy: Isigodlo SaseSanta Maria Dell Isola ETropea
Iningi lezivakashi ezigoba ilanga emabhishi egolide aseTropea azazi ngale ndawo eyimfihlo. Nokho, ngenhla kwamakhanda abo, ehlezi esiqongweni segquma elinamadwala, ezungezwe uLwandle lwaseTyrrhenian, yiSanctuary kaSanta Maria dell Isola.
Akucaci ukuthi isigodlo sakhiwa amaBenedictine noma amaBasili ngesinye isikhathi eNkathini Ephakathi. Ngakho, ungathola umlando nobuhle ngemuva kwe-facade evuselelwe yezindela. Akungabazeki, isigodlo esasinda 2 ukuzamazama komhlaba, ngokuqinisekile igcina ezinye zezimfihlo ezinhle kakhulu nezithakazelisayo zeCalabria.
UVibo Marina waya eTropea Ngesitimela
ICatanzaro iya eTropea Ngesitimela
ICosenza eya eTropea Ngesitimela
ILamezia Terme eya eTropea Ngesitimela
3. Indawo Eyimfihlo Kunazo Zonke eSwitzerland: Impophoma iTrummelbach
Esigodini sase 72 izimpophoma, ungacabanga ukuthi akukho okutholakele impophoma eSwitzerland, kepha kukhona. Enye yezindawo eziyimfihlo enkulu eYurophu yiTrummelbach Falls. Le banga ye 10 Izimpophoma ze-glacier eSwitzerland, iphakelwa ngamanzi ancibilikayo avela ku-Eiger naseJungfrau.
Ngakho-ke, lapho uvakashela futhi uhamba ngentaba, bebabaza lezi zimpophoma eziyimfihlo, gqoka izingubo ezizokuvikela ezimathonsi zempophoma eqandayo.
A isikebhe uhambo echibini elikhulu kunawo wonke elingaphansi komhlaba e-Austria kuyinto engalibaleki. Lokhu omkhulu ukubona Grotte edolobheni Hinterbruhl, uhlelo lwemihume, okwenziwe ngenhloso yezimayini, ku-WWII.
Nokho, ichibi elingaphansi komhlaba lashiywa emuva ngaleso sikhathi. Namuhla, amaSeegrotte eHinterbruhl, uguqulwe waba omunye phezulu 10 izindawo eziyimfihlo ongazivakashela emhlabeni.
5. Top Secret Place In China: INtaba iSanqing
3 Iziqu ezihlaba umxhwele phezulu emafwini, IMount Sanqing ingenye yezinto ezingcwele kakhulu emasikweni amaShayina. Ukubukwa kwentaba iSanqing akuyona nje eminye yemibono ebabazekayo ezweni laseChina, kodwa futhi nencazelo engcwele enkolelweni yamaTao; le 3 izingqungquthela zimele 3 Abamsulwa, onkulunkulu abaphezulu kunabo bonke.
Indawo ezungeze iSanqing iphinde inikeze imibono emangalisayo, imizila, namaphuzu omlingo ongawathola ku 10 izindawo ezinhle kakhulu endaweni. Ngakho-ke, zibekisele uhambo lwezinsuku ezimbili ukuya eNtabeni iSanqing, ukuze ukwazi ukujabulela ngokugcwele futhi uhlole zonke izindawo ezifihliwe.
Ubuhle bezintaba zase-Italy akuyona imfihlo egcinwe emhlabeni engcono kakhulu. Wonke umuntu uyazi ngobubanzi bezintaba, landscape, amachibi asezintabeni, nezimfunda ezibabazekayo. Nokho, I-Trentino eNyakatho-Mpumalanga ye-Italy, phakathi kwechibi Garda namaDolomites, kuvame ukuphuthelwa emzileni oya ku izimangaliso zemvelo okukhulunywe lapha. Lapha uzothola inombolo evelele ye- 297 ukuthola amachibi.
Ngaphezu kwalokho, lapha kuphela ungancoma umphumela okhethekile wokukhanya "alpenglow" eziqongweni zeDolomites, ekushoneni kwelanga.
7. Indawo Eyimfihlo Ephezulu EPoland: Ihlathi Elisigwegwe E-Szczecin
Kutshalwe eminyakeni yama-30s, Ihlathi leSzczecin lingenye yezindawo eziyimfihlo kakhulu emhlabeni. Lokhu kungenxa yokuthi ihlathi ligudluke ePoland, eduze kwedolobha laseGryfino. Ukusuka 400 izihlahla zikaphayini ezitshalwe emuva ngeminyaka yama-30, namuhla uzothola ukuthi sekusele abambalwa kuphela, isenza le ndawo ikufanele ngokuphelele ukuvakashelwa.
Isizathu sesimo esiyingqayizivele siyimfihlakalo kuze kube namuhla; abaningi bazamile ukuthola ukuthi ngabe kwenziwa ngumuntu noma isimangaliso semvelo. Ngakho, uma unquma ukuvakashela, ungahlola imfihlo yezihlahla zikaphayini’ uphayini umumo oyingqayizivele, futhi uhlole eyodwa amahlathi amahle kakhulu eYurophu.
8. Indawo eyimfihlo ephezulu eHungary: I-Tapolca
ITapolca yidolobhana elincomekayo eHungary, etholakala eduze neBaltan Uplands isiqiwu semvelo. Izivakashi eziningi ziya eHungary ziye eholidini eBudapest, kodwa idolobha laseTapolca liyimfihlo egcinwe kahle kakhulu eHungary. Ngaphezu kokuba seduze kwepaki enkulu kazwelonke, idolobha linechibi maphakathi, ngesikwele esihle namakhefi nxazonke.
Ngakho, uma ufuna ukunambitha ukudla kwaseHungary, zibabaza futhi zithole imvelo emangalisayo yaseHungary, nomhume wechibi, bese ubhuka ithikithi lakho eTapolca.
9. Indawo eyimfihlo ephezulu eNgilandi: I-Hunstanton, Norfolk
Lapho uvakashela idolobha lokuvakasha laseHunstanton eNorfolk, kuzobukeka njengedolobha elithulile lamaholide ngasolwandle. Nokho, ngemuva kokuhamba uye ogwini nasogwini olunamatshe amancane, uzothola amawa amangalisa kakhulu. Amawa ase-Old Hunstanton ayizingqimba zamatshe amatshe anemibala; itshe le-sandstone eligqwalile, i-limestone ebomvu efakwe ushoki, zizungezwe uhlaza lwasolwandle oluhlaza nolwandle oluhlaza okwesibhakabhaka.
Ngakho-ke, ibhishi elihle laseHunstanton lihlaba umxhwele impela, ikakhulukazi lapho kushona ilanga. Ngalesi sikhathi sosuku, amawa ashintsha imibala, umahluko phakathi kolwandle namawa kuhluke kakhulu. Ngaphandle kobuhle bayo bemvelo, ababaningi abazi ngale ndawo eyimfihlo e-East England. Ngakho, kungcono usheshe ukubhuka ithikithi lakho lesitimela uye emabhishi aseHunstanton, ngaphambi kokuba umhlaba wonke uthole.
10. I-Applecross Peninsula EScotland
Lesi simangaliso saseScotland senziwe safinyeleleka ngomgwaqo kuphela 1975, ngomgwaqo omazombezombe nomqansa owela inhlonhlo ngasogwini. Ngakho, uma ufuna ukuvakashela leli gem elikude, bekufanele uthembele ekuhambeni ngesikebhe wedwa, njengazo zonke izakhamuzi zalesi siqhingi.
I-Applecross iyidolobhana elihle elisogwini olusenhlonhlweni lwaseScotland. Amakamelo amancane nezindlu ezisabalele emagqumeni aluhlaza okotshani, ebheke olwandle, kuzokususa umoya.
Nge kuphela 544 izakhamizi, kunezizathu ezimbalwa kakhulu zokuhambela i-Applecross, kodwa ukubukwa okucacile futhi okuhle, thola ngokuphelele indawo njengenye yezinto eziphezulu 10 izindawo eziyimfihlo emhlabeni. Ngaphezu kwalokho, Camusterrach and Ard-dhubh are two other settlements not to miss on your exploration, njengoba nazo zithintwa ngokulambisa ngesimanjemanje.
Lapha e Londoloza Isitimela, sizojabula ukukusiza uhlele uhambo olungasoze lwalibaleka oluya phezulu 10 izindawo eziningi eziyimfihlo emhlabeni ngesitimela.
Ingabe ufuna ukushumeka okuthunyelwe kwebhulogi yethu “Phezulu 10 Izindawo Eziyimfihlo Emhlabeni ”ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fzu%2Fsecret-places-world%2F – (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
HiddenDestinations HiddenGems imfihlo SecretPlaces TopSecretplacesinEurope